» प्रदेश ३ मा ३८ सय, मकवानपुरमा ७ सय ५० जनामा डेंगु
प्रदेश ३ मा ३८ सय, मकवानपुरमा ७ सय ५० जनामा डेंगु
२६ भाद्र २०७६, बिहीबार ०८:२१
मकवानपुर । डेंगु रोगबाट प्रदेश-३ का ९ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । सबैभन्दा बढी चितवन जिल्लामा डेंगुका बिरामी फेला परेका छन् । प्रदेश-३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चितवनमा बुधबारसम्म १ हजार ४ सय ६० डेंगुका बिरामी फेला परेका छन् ।
काठमाडौंमा भने १ हजार ३ सय ४५ जना रहेका छन् । मकवानपुरमा ७ सय ९१, ललितपुरमा १ सय ५ र भक्तपुरमा ९६ डेंगुका बिरामी फेला परेको सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले बताए ।
यसैगरी, धादिङमा २३, काभ्रेपलान्चोकमा ६, नुवाकोटमा २ र सिन्धुपाल्चोकमा १ जना फेला परेको जानकारी दिएको छ । दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र रसुवा डेंगुका रोगी नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सतिश विष्टले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका थिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले डेंगु नियन्त्रण गर्न प्रदेशका सम्पूर्ण नागरिकलाई ‘खोज र नष्ट’ अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।
प्रत्येक शनिबार बिहान ७ बजेदेखि ८ बजेसम्म आफ्नो क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा सरसफाइ गर्ने, डेंगुका लार्भा खोज र नष्ट गर्ने अभियान चलाउन मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ । समुदाय सक्रिय र सजग नभएसम्म डेंगु नियन्त्रणमा आउन नसक्ने भएकाले राजनीतिक दललगायत सम्पूर्ण क्षेत्रका समुदाय सामूहिक रूपमा यो अभियान सहभागी हुन मन्त्रालयले सबैसँग आह्वान गरेको छ । यो अभियान कात्तिक मसान्तसम्म सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले डेंगु प्रभावित जिल्लाका अस्पतालहरूलाई ५०/५० थान झुल वितरण गरेको छ ।
७ सयभन्दा बढी बिरामी
एडिज नामको पोथी लामखुट्टेले टोक्दा हुने डेंगु ज्वरोबाट प्रभावितको संख्या मकवानपुरमा मंगलबारसम्म सात सय नाघेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख शशिकान्त सिंहका अनुसार करिब १ हजार ५ सय जनाको रगत परीक्षणपश्चात् ७ सय ५० जनामा डेंगु रोग फेला परेको हो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका- ४ को कमलडाँडा, हुप्रा चौर क्षेत्र बढी डेंगु प्रभावित रहेको छ । सिंहका अनुसार डेंगु उपमहानगरपालिका मात्र होइन, ग्रामीणभेगमा पनि देखिएको छ । नगरपालिका क्षेत्रमाप्रकोप बढी छ । हेटौंडामा रहेको सरकारी वा निजी अस्पतालमा डेंगुका रोगीको चाप छ । बेडको अभावले गर्दा एउटै बेडमा २ जना र भुइँमा पनि सुताएर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । ‘अस्पतालमा बिरामीको भिडामभीड छ,’ हेटौंडा अस्पतालका प्रमुख डा. प्रवीण श्रेष्ठले भने, ‘उपचार गराइरहेका बिरामीमध्ये अधिकांश डेंगुका रोगीहरू छन् ।’
सरकारीमा मात्र होइन, निजी अस्पतालको हालत पनि उस्तै छ । चुरेहिल, हेटौंडा सहकारी र सिटीलगायत अस्पतालमा बिरामीको अत्यधिक चाप छ । सहकारी अस्पतालको प्यासेजमा पनि बिरामी सुताएर उपचार गराइराखेका छन् । डेंगु मात्र होइन, स्क्रब टाइफस र भाइरल ज्वरोका रोगी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । ‘केही बिरामी डेंगु र स्क्रब टाइफस दुवैबाट पीडित छन्,’ हेटौंडा अस्पतालका चिकित्सक डा. कमल दवाडीले भने, ‘दुवै रोगबाट पीडित बिरामी थोरै मात्र छन् ।’
डेंगु गराउने लामखुट्टेले जमेको सफा पानीमा अण्डा पार्छ । पाँच एमएल पानी जमे पनि त्यसमा एडिजले अण्डा पार्ने उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुपेन्द्र कार्कीले बताए । ‘पुराना टायर, एसी, कुलर,ट्यांकीजस्ता ठूला भाँडामा पानी जमेको छ भने पनि एडिजले अण्डा पार्छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसैले पानी जम्न नदिनु एडिज नियन्त्रण गर्ने मुख्य उपाय हो ।’ हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको सक्रियतामा ‘सर्च एन्ड डेस्ट्रोय’ अभियानसँगसँगै समुदायमा चेतनामूलक अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।
उपमहानगरपालिकाद्वारा किट उपलब्ध
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले डेंगु परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किट स्वास्थ्य कार्यालयको ल्याबलाई उपलब्ध गराएको छ । तीन सयवटा किट उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कार्कीले बताए ।
जिल्ला स्वास्थ्य शाखाको ल्याबले डेंगुको परीक्षण निःशुल्क गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रका ल्याबमा १ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका छन् । उच्च ज्वरोसँगै चिकित्सकले अन्य दुई खास लक्षण टाउको दुख्ने, बान्ता आउने, शरीरमा डाबर देखेमा डेंगुको उपचार गर्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रावधान छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।